About Us – JOOPZY
Ku soo DHAWOOW KAFTAN. Hada waad heshay ugu weyn dukaanka internetka inta badan baahiyahaaga. Ka baaraan deg deg deg deg ah oo la soco baraha bulshada si aad u hesho fursado qiimo dhimis badan. Waxaan si joogto ah u keydineynaa alaabada si aan noloshaada uga dhigno mid aad u wanaagsan.
KAFTAN waa 8 sano jir shirkad dukaameysi oo internetka ah oo dadka ugu adeegata alaabada kala duwan ee warshadaha. KAFTAN waa shirkad gebi ahaanba madaxbanaan sidaa darteed daacadnimadeena kaliya waxaa iska leh macaamiisheena, waxaan ku dadaalnaa sidii aan ugu adeegi lahayn macaamiisheena buuxda. Waxaan aaminsanahay aaminaada dhexdeena ah inay aad muhiim utahay
Waxaan dareemaynaa nasiib wacan inaad dooratay Joopzy.com sameynta iibsashada internetka! Xor ayaad u tahay inaad la xiriirto KAFTAN xili walba!